सचिनलाई कोरोना । आइसोलेसनबाट के भने लेजेण्ड क्रिकेटरले ? - cricketingnepal.com.np :: :: all about Nepali Cricket, Live Streaming, News, Views, Articles, Live scores, Statistics, Results, Fixtures, Player Profiles
सचिनलाई कोरोना । आइसोलेसनबाट के भने लेजेण्ड क्रिकेटरले ?
क्रीकेटिङ्ग नेपाल २०७७-१२-१४
मैले लगातार परिक्षण गर्नुका साथै कोभिडलाई टाढै राख्न आवश्यकता अनुसारको सतर्कता अपनाइरहेको थिए । निकै सानो लक्षण पछि मलाई पोजिटिभ देखिएको छ । घरमा अरु सबैजनालाई नेगेटिभ देखाएको छ, सचिनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
मैले आफूलाई क्वारेन्टिनमा राखेको छु र डाक्टरको सुझाव अनुरुप स्वास्थ्य प्रोटोकोल फलो गर्दैछु । मलाई सहयोग गरिरहनु भएका सम्पूर्ण स्वास्थ पदाधिकारीहरुलाई म धन्वाद दिन चाहन्छु । तपाईहरु पनि आफ्नो हेरबिचार गर्नु होला, उनले भनेका छन् ।
भारतमा केही साता यता दैनिक रुपमा कोरोनाका हजारौं बिरामी भेटिन थालेका छन् । यसअघि केही खुकुलो गरिपनि अहिले सार्वजनिक स्थानहरुमा पनि स्वास्थ्य ऐन अन्तर्गत कडाइ गरिएको छ ।